Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ahụike ProCare nke Clinigence Holdings nwetara
Clinigence Holdings, Inc., otu n'ime mba na-eduga teknụzụ na-enyere aka, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike mmadụ na-ebute ihe egwu, taa kwupụtara na ọ mechaala nweta ProCare Health, Inc.
Dabere na Garden Grove, California ma hiwe ya na 2011, ProCare bụ ọgbakọ na -ahụ maka njikwa njikwa (“MSO”) nke na -enye ọrụ ugbu a maka otu nlekọta ahụike (“HMO”) na ndị otu nnwere onwe dọkịta atọ (“IPAs”) na Ndịda na Northern California. MSO bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa na-enye akụrụngwa nchịkwa na teknụzụ dị mkpa maka IPA na-ebute ihe ize ndụ iji rụọ ọrụ nke ọma na mmekọrịta ha na ndị akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu. Ndị MSO na -enyere ndị otu dibịa aka inwe ihe ịga nke ọma n'echiche nke ihe ize ndụ ego na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, iji melite arụmọrụ nzukọ na nnyefe nlekọta yana ịnye nyocha data nwere ike ime. ProCare na -enye nchịkwa nkwupụta, nnabata, nzere, njikwa mma, njikwa ojiji, nkwekọrịta, mmekọrịta onye na -eweta, ọrụ ndị otu, njikwa nlekọta, njikarịcha koodu na ọrụ mkpesa ego, n'etiti ọrụ ndị ọzọ.
N'okpuru usoro nke nkwekọrịta ịzụrụ ngwaahịa, Clinigence nyere ndị na-akwụ ụgwọ ProCare 759,000 ndị ewepụtala òkè ọhụrụ n'ahịa n'oge mmechi maka 100% nke nchekwa nha anya pụtara ìhè nke ProCare. Tụkwasị na nke ahụ, etinyerela usoro ntinye ego iji kwụọ ụgwọ ProCare na nkwekọrịta MSO ọ bụla n'ọdịnihu.
"Ịnweta ProCare bụ akụkụ nke atụmatụ uto anyị na-aga n'ihu ma na-enye anyị ohere ịgbasawanye Pọtụfoliyo anyị na ngalaba MSO," Warren Hosseinion, MD, Onye isi oche na onye isi nchịkwa kwuru. "Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị otu ProCare, nke nka na mmasị ha ga-ewusi ụlọ ọrụ anyị ike."
Anh Nguyen, onye guzobere na onye isi oche nke ProCare Health kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ isonye na Clinigence, onye otu njikwa ya nwere ihe karịrị afọ 100 na ahụmịhe jikọtara ọnụ na mpaghara." "ProCare na-ebute ụzọ nlekọta nlekọta, na-elekwasị anya na njikwa ojiji, mgbatị ọrịa na-ahazi ihe ize ndụ yana inyere ndị na-eweta aka n'ịnye ndị ọrịa ha nlekọta dị mma."